Governemanta afrikana fito no mampiasa rindram-pitsikilovana, hoy ny fanadihadiana vaovao · Global Voices teny Malagasy
Manjohy telefônina sy misintona antso sy lahatsoratra ilay teknikam-pitsikilovana
Voadika ny 15 Desambra 2020 4:32 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, বাংলা, عربي, polski, Français, Deutsch, English, Ελληνικά, English
Sarintany avy amin'ny Citizen Lab mampiseho ireo firenena mikirakira ny rindram-pitsikilovan'ny Circle
Mampiasa teknolojiam-pitsikilovana ny governemanta amin'ny firenena miisa fito — Botswana, Ginea Ekoatorialy, Kenya, Maraoka, Nizeria, Zambia, ary Zimbabwe — araka ny nataon'ny Citizen Lab, vondrom-pikarohana marotaranja iray ao amin'ny Oniversiten'i Toronto, Canada.
Tsikaritry ny fanadihadiana fa farafahakeliny firenena miisa 25 manerana ny tany no mampiasa rindrambaiko fitsikilovana vokarin'ny Circles, orinasa iray mikambana amin'ny vondrona NSO avy ao Israely. Nilaza ny fanadihadiana fa ny firenena-fanjakana ihany no ifampiraharahan'ny Circles.
Nahatsikaritra ny tatitra, nosoratan'i Bill Marczak sy efatra hafa, fa “sonia tokana no mifandrohy amin'ny hostnames [anarana-fampiatranoana] ireo rindrinafo Check Point kirakiraina amin'ny fanapariahana ao amin'ny Circles, ka nahafahanay mamantatra ny fivelaran'ny Circles.” Ny Check Point dia orinasam-piarovana an-tsibera Amerikano-Israeliana mpitari-dalana.
Araka ny fanadihadiana, ny lesoka famantarana iraisan'ny firafitra finday amin'ny ankapobeny ahafahana mitsipalotra ireo antso sy soratra ary ny fanjohiana ny telefônina no trandrahan'ny Circles.
Ny teknikam-pitsikilovana ampiasain'ny Circles dia antsoina hoe Signaling System 7 (SS7), “tohizan'arofenitra novolavolaina tamin'ny taona 1975 natao ifanakalozana torohay sy andefasana antso telefônina eo amin'ny orinasam-pifandraisandavitra an-tariby,” hoy ny tatitra. Amin'izao fotoana izao ny SS7 dia ampiasaina amin'ny fanaovana lazambidy tambajotram-pinday 2G sy 3G amin'ny antso miampita sisitany noho ny fifindra-toerana.
Thomas Brewster, mpamakafaka amin'ny fiarovana an-tsibera ao amin'ny Forbes izay nitatitra ny fanadihadian'ny Citizen Lab, no mbola nanampy fanazavana fa raha misy olona mandeha any amin'ny firenena iray hafa, “dia ampiasaina ny tambajotra SS7 hamindrana ny findainao hankany amin'ny orinasa iray mpanome tolotra fifandraisandavitra mpiara-miasa ary hanitsy ny lazambidy (faktiora) mifanaraka amin'izany.” Na izany aza, misy ny fivadihan-dalana ao anaty fizotra mahazatra raha afa-miditra amin'ny tambajotra SS7 ny “mpivarotra fitsikilovana iray”, “na amin'ny alalan'ny fisovohana na amin'ny alalan'ny fahazoana (fividianana) azy.” Avy eo ny SS7 mandefa “kaomandy ankosoka amin'ny tambajotra ao an-toerana ilay mpamandrika lazaina fa manao antso ivelan'ny fireneny (roaming). Izany avy eo no hamoaka ny toerana misy azy ireo, na dia ny fangitra misy ilay tilikambon-telefônina finday akaiky ilay telefônina indrindra aza no tondroiny,” hoy i Brewster.
Ireo mpanjifa ny Circle eto Afrika voamariky ny Citizen Lab dia ireto manaraka ireto: Fitaleavan-draharahan'ny servisim-piarovana sy fitsikilovana ao Botswana (DISS), ny minisiteran'ny atitany ao Maraoka, Masoivohon'ny Fitsikilovana ao amin'ny Fiarovan'i Nizeria (DIA), ary sampan-draharaha iray tsy fantatra ao Zambia.